Monday October 12, 2020 - 18:55:08 in Wararka by Mogadishu Times
Saxaafada Ingariiska ayaa shaacisay fiidnimadan Axada ah in ciyaaryahanka khadka dhexe reer Guinea iyo kooxda Liverpool ee Naby Keïta uu ku dhacay Korona Fayras. Liverpool ayaa si rasmi ah u shaacisay Talaadadii la soo dhaafay in xiddigeeda ree
Saxaafada Ingariiska ayaa shaacisay fiidnimadan Axada ah in ciyaaryahanka khadka dhexe reer Guinea iyo kooxda Liverpool ee Naby Keïta uu ku dhacay Korona Fayras. Liverpool ayaa si rasmi ah u shaacisay Talaadadii la soo dhaafay in xiddigeeda reer Switzerland Xherdan Shaqiri uu ku dhacay Korona Fayras. Liverpool ayaa sidoo kale xilliyadii la soo dhaafay shaacisay in xiddigeeda dhawaangalka ah ee Thiago Alcantara uu ku dhacay Korona Fayras, si la mid ah weeraryahankeeda reer Senegal ee Sadio Mane iyo sidoo kale Konstantinos Tsimikas. Warbaahinta Ingariiska ayaa kaga nixisay taageerayaasha kooxda Liverpool inyar ka hor arrinta ku saabsan in xiddigooda khadka dhexe ee Naby Keïta uu ku dhacay Korona Fayras.